Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo lagu xiray Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 2 July 2015
Wararka ayaa sheegaya in Xildhibaanka la xiray uu ka soo jeedo deegaanada Somaliland, waxaana lagu magacaaba Xildhibaan Axmed Xuseen Xasan.
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaam Ramaax ayaa xaqiijiyay xariga Xildhibaanka ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, isagoo ku eedeeyay in khiyaano qaran.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in sharciga la horkeeno doono Xildhibaankan sida sharci darrada ku soo galay deegaanada Somaliland.
Somaliland ayaa horay sharci uga soo saartay qofkii deegaanadeeda ka soo jeeda ee xil ka qabtay dowladda Soomaaliya lagu soo oogi doono dambi khiyaano qaran ah, isla markaana aanu dalka imaan karin, sidoo kale waxay deegaanadeeda ka mamnuucday Siyaasiyiinta ka soo jeeda Koofurta Soomaaliya.